एलर्जी नै कम से कम एक पटक आफ्नो जीवनमा हाम्रो ग्रह हरेक बासिन्दा भोगे। यो रोग धेरै प्रकारका छन्। यस लेखमा हामी विषाक्त-एलर्जी dermatitis हेर्न। यो irritants, allergens, यो मामला मा गर्न जोखिम फलस्वरूप मानिसहरूलाई हुन्छ। यो विकृति एक बच्चा र वयस्क दुवै हुन सक्छ कि टिप्पण लायक छ। हालै त्यहाँ नकारात्मक प्रवृत्ति थियो: रोग थप र थप progresses, र मान्छे को धेरै यसलाई ग्रस्त। तथ्याङ्क अनुसार, ग्रह को प्रत्येक दोस्रो बासिन्दा यसलाई के छ जस्तो लाग्यो।
विषाक्त र एलर्जी dermatitis शरीर stimuli गर्न जोखिम गर्न तीव्र प्रतिक्रिया छ (आईसीडी-10 L20-एल 30 को दायरामा कोड प्रदान)। यो विकृति जन्मजात गर्न सकिन्छ कि टिप्पण लायक छ। शरीर मा allergen को सम्पर्क क्षणमा सेल संरचना यसको अन्तरक्रिया सुरु हुन्छ। यस प्रक्रियाको फलस्वरूप यो क्षतिग्रस्त छाला हो।
सीधा सुनिंनु इन्जाइम लागूऔषधको निषेध कारण हो। यो विषाक्त र एलर्जी dermatitis बढि गंभीर फारम सक्छ। यस मामला मा, मात्र छाला असर गर्छ, र परिवर्तन को जीव को जवाब।
यो एक व्यक्ति को शरीर, अर्थात्, सीरम एंटीबडी गठन गरिएका उल्लेख गर्नुपर्छ। को allergen प्रतिक्रिया र संवेदनशीलता टोक्सिन को मात्रा निर्धारण गरिन्छ। यी घटनाहरू विकृति समयमा वा आनुवंशिक predisposition को पृष्ठभूमिमा आउँदैन।
चिकित्सा को क्षेत्र मा विशेषज्ञहरु अहिले यो रोग धेरै प्रकारका छन्। का तिनीहरूलाई विचार गरौं:
Bullous विषाक्त र एलर्जी dermatitis। यस मामला मा, शरीर को दबाइहरु नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्छ। यो सबै दबाइहरु एलर्जी हुन सक्छ कि टिप्पण लायक छ, तर ती केवल जो बर्नर वा आयोडिन समावेश गर्नुहोस्।
भेट्यो दबाइ प्रतिक्रिया। रोग को यस प्रकारको पनि दबाइ अधिमात्रा आधारमा हुन्छ। यस अवस्थामा खराब औषधीको आर्सेनिक वा पारा समावेश छ।
Pustular dermatitis। अघिल्लो लेखमा दुई प्रकार जस्तै, एक स्वागत medicaments को मुख्य कारण। प्रतिक्रिया तयारी समावेश लिथियम र भिटामिन बी कारण
दानेदार दबाइ प्रतिक्रिया। यो रोग दबाइ tetracycline लिएर फलस्वरूप हुन्छ। विषाक्त र एलर्जी dermatitis के हो? यसको manifestations को एक को फोटो तल प्रस्तुत गरिएको छ।
माथिको-उल्लेख प्रकार आधारभूत छन्, तर medics अर्को जारी: urticaria दबाइ प्रतिक्रिया। Activators रोगनाशक ओषधि समावेश एजेन्ट छन्। छाला को सुनिंनु रूपमा रक्सीको प्रयोग कारण हुन सक्छ। प्रकाश, मध्यम र भारी: त्यहाँ रोग घटना धेरै प्रकारका छन्। रोग को प्रकार र खुलारूपमा निर्धारण गर्न, यो एक त्वकरोग वा एलर्जी विशेषज्ञ भ्रमण गर्न आवश्यक छ।
पहिले नै उल्लेख रूपमा, विषाक्त र एलर्जी dermatitis एलर्जी को एक प्रकार छ। विकृति विशेषता छ: मात्र मानव रगत लक्षण stimuli रही पछि देखा र छाला मा विशिष्ट manifestations।
रोग को कारण एक विशाल राशि। मुख्य व्यक्तिहरूलाई विचार गर्नुहोस्:
विभिन्न medicaments को स्वागत;
रसायन संग सम्पर्क गर्नुहोस्;
साधारण खानेकुरा र विदेशी फल;
दुग्ध उत्पादन, सुशी, रोल, नट, मह;
मसला, त्यसैले खाद्य पदार्थ धूम्रपान, र। डी।
मान्छे जसको शरीर यो रोग एक आनुवंशिक predisposition छ, यो सुन र आर्सेनिक टाढा रहन सिफारिस गरिएको छ। बहुमूल्य धातु प्रेम बनाउनसमेत गर्न उसलाई कुनै पनि सम्पर्क हुँदैन। चाँदी आभूषण लागि रोज्न गर्नुपर्छ।
यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ रोगी उमेर र लिङ्ग बिना विषाक्त र एलर्जी dermatitis को लक्षण नै प्रकट हुनेछ। , को घुँडा झुकन को जनन र armpits वरिपरि, को कुहिनो को भित्र मा: को दाना धेरै अप्रिय ठाउँमा देखिन्छ।
साथै प्रत्यक्ष दाना निम्न सुविधाहरू छन् गर्न:
चक्कर आना र टाउको दुखाइ;
वाकवाकी र उल्टी;
कमजोरी, unwell महसुस।
यी लक्षणहरू जस्तै ringworm, स्कारलेट ज्वरो र psoriasis अन्य रोगहरु को लक्षण समान छन्। व्यवहार मा, धेरै पटक त्यहाँ अवस्थामा डाक्टर को निदान गलत थियो जब, लक्षण प्रत्येक अन्य धेरै त्यस्तै भएकोले गरिएको छ।
यो शायद सबै भन्दा कठिन चरण हो। एलर्जी विशेषज्ञ वा त्वकरोग पहिलो रोगी सुन्न र उहाँलाई सबै लक्षण बारेमा सोध्नु पर्छ। रोगी, बारी मा, इमानदार, सही निदान को सम्भावना उच्च थियो जवाफ हुनुपर्छ। तपाईं एक विशेषज्ञ दबाइहरु एलर्जी को उद्भव लिङ्क गर्नेछ, आफैलाई व्यवहार गर्न सुरु गर्न सक्दैन।
बाह्य परीक्षा पछि, डाक्टर प्रयोगशाला अध्ययन गर्न रोगी, यो एक विशेष परीक्षण लिन्छ पठाउँछ। को विकृति को गंभीर डिग्री मा प्रकट भएको छ भने, रोगी अस्पताल पठाइएको छ। त्यहाँ विशेषज्ञहरु को पर्यवेक्षण अन्तर्गत, त्यो immunoassay रगत माथि हातमा। यो राम्रो रगतको संरचना बुझ्न, साथै allergens पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेछ।
रोग को निदान रूपमा गलत हुन संभावना छ, लामो समय लाग्न सक्छ। यो जोगिन, डाक्टर सबै आवश्यक परीक्षण लिनुपर्छ, र अनुसन्धान सञ्चालन गर्छन्। यी परिणाम, को निदान आधारमा। विषाक्त र एलर्जी dermatitis कस्तो व्यवहार गर्ने? निम्न विचार गर्नुहोस्।
चिकित्सा व्यक्तिगत डाक्टर प्रदान र रोगी पूर्ण रिकभरी हासिल गर्न पूर्ण यसलाई पालना गर्नुपर्छ। उपचार को सम्पूर्ण अवधि, रोगी राम्ररी एक विशेषज्ञ द्वारा अनुगमन गर्नुपर्छ। सुरु गर्न, डाक्टर ती औषधि हो जो गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया कारण सक्षम prescribes। साथै, अक्सर diuretics र laxatives प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं। तिनीहरूले शरीर बाट बाँकी allergens deduce गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उपचार विषाक्त र एलर्जी dermatitis desensitizing उपचार संग गरिन्छ। यसको रूपरेखा निर्धारित लागि प्राप्त antihistamines, साथै कि भिटामिन सी समावेश दबाइहरु भित्र
जहाँ विकृति गंभीर रूप प्राप्त मामला मा, विशेषज्ञहरु corticosteroids को प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं। यस मामला मा, उपचार सम्पूर्ण पाठ्यक्रम, रोगी अस्पताल जाने गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीं डाक्टर यस्तो nanodiamonds उपयोग गरदै र जलीय समाधान रूपमा बाह्य तयारी prescribes। वयस्क फोटो विषाक्त र एलर्जी dermatitis, थप ठीक, रोग को छाला manifestations मा, तल प्रस्तुत गरिएको छ।
को उपचार को लागि लोक उपचार
लागि एक उत्कृष्ट समाधान dermatitis को उपचार स्टेटजोन्स wort छ। यो बोट नै यी परिस्थितिमा राम्रो सिद्ध भएको छ। स्टेटजोन्स Wort हटाउनु वा सुनिंनु को संकेत कम गर्न मद्दत गर्ने विरोधी भडकाऊ गुण छ। को शोरबा तयार गर्न, तपाईं सुख्खा जडिबुटी स्टेटजोन्स wort र उम्लिरहेको पानी आवश्यक छ। इष्टतम अनुपात2चमचा गर्न मानिन्छ। चम्मच / 200 एमएल पानी। शोरबा लगभग दुई घण्टा infused र क्षतिग्रस्त छाला क्षेत्र मा एक संकुचन रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
व्यवहार मा, ठूलो मद्दत र आलु tuber। आलु राम्रो rinsed र एक ब्लेंडर प्रयोग चोट हुनुपर्छ। परिणामस्वरूप मिश्रण gauze र निचोड धारण थियो। यी कार्यहरू पछि आटा बाँकी शरीर को प्रभावित क्षेत्रमा लागू गर्न सकिन्छ।
साथै, विषाक्त र एलर्जी dermatitis छुटकारा गर्न बिरुवा मलम (10%) र जीरा tincture (20%) बाट धेरै राम्रो छ। यो लेप प्राथमिकताको सुत्नेसमय मा पातलो पत्र लागू गर्नुपर्छ। आउटडोर लागि, यो समाप्त फारममा फार्मेसी मा खरिद गर्न सकिन्छ। तपाईं के गर्न आवश्यक सबै प्रभावित ठाउँमा लागू छ।
यो एलर्जी लागि लोकप्रिय उपचार प्रभावकारी छन् भनेर टिप्पण लायक छ, तर यो एक डाक्टर अनुमोदन बिना प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन। त्यसैले तपाईं पहिलो एक विशेषज्ञ परामर्श गर्नुपर्छ आत्म, राम्रो केहि गर्न नेतृत्व गर्दैन।
यो विकृति मा आहार
औषधि र लागूपदार्थ संग उपचार, अनिवार्य आवश्यकता साथै आहार पालना गर्न। यो बिना उपचार पूरा छ। एक विशेष सूची प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जो उत्पादनहरु एक विशेष अवस्थामा सिधै चिकित्सक छ। उहाँले दृश्य निरीक्षण, सर्वेक्षण, र विभिन्न अध्ययन को परिणाम को आधार मा निर्णय। कुनै पनि मामला मा, तपाईं उच्च एलर्जी गतिविधि संग खाद्य पदार्थ हरेस हुनेछ के को लागि तयार हुन आवश्यक छ।
अक्सर, डाक्टर निषेध:
दूध, अन्डा, मेवा, सिट्रस फल;
मेयोनेज, ड्रेसिङ, सस;
माछा, मशरूम, समुद्री;
तयारी को विधि लागि, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। मनमोहक खाना उसिनेर वा धमाकेदार र एक एलर्जी प्रतिक्रिया कारण जिगर को क्षमता रूपमा तला। गर्नुपर्छ पिउन ध्यान। यो केवल हरियो चिया र गैर-कार्रोप्नेटेड खनिज पानी पिउन सिफारिस गरिएको छ।
छोराछोरीको विषाक्त र एलर्जी dermatitis
छोराछोरी, वयस्क जस्तै, यो रोग प्रभावित छन्। उहाँले यस्तो क्रीम या दबाइ रूपमा खाने को नालायक कुरा, swallowed थियो भने बच्चा रोग उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो त्यहाँ मात्र दाना, तर पनि सानो चर्किएको छ। तिनीहरूले सामान्यतया घुँडा, खुट्टा, एडी र कोहनी मा अनुवादित छन्।
चर्किएको बेचैनी र दुखाइ कारण। विशेष गरी खराब तिनीहरूले खुट्टा वा एडी मा उत्पन्न हुँदा, त्यसपछि बच्चा हिंड्न गाह्रो छ। बच्चाहरु खडा गर्न सक्दैन, र सधैं rashes खुजली सँगसँगै। त्यसैले तिनीहरू जसबाट pustules कारण, यी ठाउँहरू कंघी। यो जोगिन, तपाईं एलर्जी लक्षण को उपस्थिति आवश्यक तुरुन्त आफ्नो चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्। तपाईं बच्चा निको पार्न प्रयास स्वामित्व भने, छैन प्राप्त गर्न सकिन्छ। छोराछोरीको विषाक्त र एलर्जी dermatitis को manifestations कसरी? फोटो लेख मा प्रस्तुत।
रोग को रोकथाम
निस्सन्देह, आधुनिक चिकित्सा एक विशाल चरण अगाडि बनाएको छ, र अब डाक्टर कुनै पनि रोग निको पार्न सक्षम छन्। यो ज्ञात छ, यो एक लामो समय उपचार को पाठ्यक्रम पारित गर्न को लागि त के आफ्नो स्वास्थ्य, निगरानी गर्न धेरै सजिलो छ। रिकभरी धेरै समय लिन र असुविधाको धेरै कारण हुन सक्छ। होसियार भने, तपाईं रोग को घटना रोक्न सक्छ।
संग कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली मान्छे विशेष सावधान हुनुपर्छ। हामी तपाईं उपभोग गर्ने खानाको लागि लगाउने भएको गहने निगरानी गर्न आवश्यक छ। यो माछा कच्चा खान सिफारिस गरिएको छैन, र मासु राम्ररी तयार हुनुपर्छ। पनि लुगा को विकल्प तपाईं यसलाई छोराछोरीलाई आउँछ विशेष गरी जब, सावधान हुन छ।
मानव रगत stimuli, अर्थात् allergens मा प्राप्त प्रतिक्रिया - विषाक्त र एलर्जी dermatitis (आईसीडी 10, पहिले नै उल्लेख, यो L20-एल 30 को दायरामा कोड तोकिएको छ)। यो एक धेरै अप्रिय विकृति, असुविधाजनक स्थानहरू दाना मा उपस्थिति सँगसँगै छ। यो रोग दुवै बच्चाहरु र वयस्क हुन्छ।
यसको घटना रोक्न क्रममा, यो उनको स्वास्थ्य निगरानी गर्न आवश्यक छ। तपाईं हानिकारक खाना र विचारै लिएर लागूपदार्थ दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। तपाईं पहिलो लक्षण फेला भने, तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्। उहाँले उपचार को एक पाठ्यक्रम, नियुक्त गर्नेछ बित्दै जाँदा जो पछि, तपाईं रोग को छुटकारा प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ।
लक्षण, कारण र उपचार: एलर्जी रोगनाशक ओषधि गर्न
सही एलर्जी दबाइहरु कसरी चयन गर्न
एलर्जी फूल गर्न: लक्षण, रोकथाम र उपचार
कलेजो पाइ लागि एक सरल नुस्खा।
स्थायी निवास लागि ब्रिटेन गर्न अध्यागमन: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
"निलो प्रकाश"। किनमेल, अवकाश र मनोरञ्जन